Qolka Musqusha ee Madoobaadka leh oo leh Qiijiye Gaaban oo Swivel ah
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qasabadaha Musqusha oo Fidsan / WOWOW Qolka Musqusha ee Madoobaadka oo leh Qiijiye Gaaban oo Swivel ah
qiimeeyay 4.91 out of 5 ku salaysan 23 ratings macaamiisha
Tuunbada qolka musqusha ee qulqulaya oo baahsan
Madoobaadka balaaran ee qulqulaya ee qiiqa musqusha
Si wanaagsan oo isku dhafan tubbada musqusha ee qulqulaya ee baahsan
Si fudud loo rakibo tubbada musqusha ee qulqulaya qulqulaya madow
SKU: 2320300B Categories: Qubeyska Musqusha, Qasabadaha Musqusha oo Fidsan Tags: Black, Kala saar gacanta, Hadalka Siiriya, Laba Gacmeed
Shayga ayaa isagu iska hadlaya. Rakibaadda ayaa ka yara adkaatay sidii caadiga ahayd durdurkii hore awgood. Muddo dheer ayey qaadatay in la soo bixiyo laakiin wixii intaa ka dambeeyay wax waliba sidii loogu talo galay ayey u dhaceen. Eeg sawirrada, sidaan idhi, badeecaddan ayaaba iska hadlaysa
Kuma khaldami kartid qormadan! Aad ayey sifiican usameeyeen oo waajibaad culus oo sicirka aanan fileynin. Waxaan eegnay Home Depot iyo Lowes qasabadaha saxanka madow marka hore. Midkoodna uguma qurux badnayn dhammaantoodna waxay ahaayeen ugu yaraan laba jibbaar ama saddex jibbaar qiimaha. Waxaan si aad ah ugu qanacsanahay qormadan!
Alaab aad u wanaagsan qiimaha, waligaa ma ogaan doontid inay tan ka hooseyso $ 100. Waxay umuuqataa mid quruxsan oo jilicsan waxaanan jeclahay dhamaadka ciyaarta. Waxa uu ku habboon yahay suuligayga oo si fiican buu u shaqeeyaa.
Gabi ahaanba jecel qasabadan! Nice & culus qiimo macquul ah! La rakibay 4 bilood ka hor & wax dhib ah ma jiraan. Matte madow oo fiican ayaa u dhigma qalabkayaga kale ee musqusha si dhammaystiran.
Runtii waxaad jeceshahay muuqaalka iyo qasabada iyo burooyinka laakiin dusha sare ee bullaacadda ayaa midab isu beddelaya. Waan soo celiyey qeybtii ugu horeysay ee aan iibsaday maxaa yeelay waxay isu rogtay midab cad-ish ka dib markii aan isticmaalnay markii ugu horeysay. Waxaan helnay bedel kii labaadna wuu sameeyay. Aad ayaan uquruxsanahay. Waan jeclahay muuqaalka waxyaabaha ka socda musqushayada cusub laakiin ma garan karo waxa ku socda goolhayaha. Waxaan isku daynay caday kala duwan iyo saabuuno si aan u aragno inay wax isbadal sameeyeen iyo inkale. Waxaan isku daynay xalal nadaafadeed oo kaladuwan iyo waliba masaxaad sixir ah si aan isugu dayno inaan u nadiifino laakiin waxba kuma caawiyaan midabka. Waxaan gabi ahaanba siin lahaa 5-ta xiddig hadii aysan tani ku dhicin daboolida qashin-qubka!
Tayada qasabaddan musqusha waa uun cabsi. Waxaan horeba u sheegi karay inay xaqiiqdii si fiican loo sameeyey oo ay waajib culus tahay. Waxaan fiiriyey meel kasta oo ah nooca qasabadda musqusha, laakiin midkoodna tan iyo sidii uu u ahaa kan saxda ah ee ku habboon qolka musqusha. Qiimaha dukaamada kale way ka qaalisan yihiin tan. Nidaamka rakibaadda wuxuu ahaa mid quruxsan oo wax waliba u socdaan sidii loogu talagalay. Nidaamku waa mid aad u guuleystey isla markaana fudud. Joojiye gororiyaha ayaa sidoo kale ahaa wax fiican in lagu daro setka. Midabku waa midabkii aan raadinayey. Tuubada musqusha ayaa aad ugu muuqata musqusha. Waxaan kula talinayaa badeecadan qofkasta waxaadna hubaal dareemi doontaa inay u qalanto boqolkiiba kasta oo aad ku iibsatay.
Ilaa hadda, aad u fiican! Ninkaygu wuxuu ku qaatay dhowr saacadood inuu rakibo labo ka mid ah laakiin kaliya maxaa yeelay jadwalka jira wuu dhib badnaa in laga saaro. Waan jeclahay daadinta push aad ayey ugu fududahay caruurtu inay isticmaalaan. Jadwalka waa madaw fidsan sida lagu sharaxay iyo maxay qiimo ugu tahay waxa aad hesho. Haddii wax isbeddelaan, hubaal waan cusbooneysiin doonaa dib-u-eegidgan.
Aad ayaan ugu qanacsanahay muuqaalka, shaqaynta iyo tayada qalabka qasabadani. Dhamaadku waa qurux badan yahay. Wax walba oo ku saabsan setan oo ay ku jiraan baakadaha ayaa aad uga qurux badan isla qiimaha 'wax dhisayayaasha' lagu iibiyo Lowe iyo Depot Home.
Dhuuqmada runtii aad ayey ufiicanyihiin faankeena oo aan soo iibsanay oo lahaa seddex dalool oo laga jaray miiska marmar. Ninkayga ayaa la xanibay si ku saabsan sida ugu fudud ee loo rakibo, aad uga fudud inta badan. Way fududahay inuu i weydiisto inaan mid labaad u iibsado musqushayada kale ee aan hadda dib u cusbooneysiineyno. Marka waan sameeyay! Runtii waa wax qurux badan oo culeys xoog leh ku leh, sinnaba ugama filna.
Musqulaha la cusbooneysiiyay howsha markii aan ku jirnay waxaan ogaanay in qasabaddeenii hore ay daxalaysatay. Waxaan rakibnay tuubadan madow ee cusub waana wax lala yaabo! Waxay umuuqataa SO WANAAGSAN, way fududahay in la rakibo, waana jeclahay qulqulka / pop-up drainage!
Tuubadaani waa qurux badan tahay. Wuu istaagaa laakiin ma dheereeyo. Si adag ayaa loo sameeyay. Ma dareemin wax raqiis ah gabi ahaanba. Tani waa qiimo weyn iyo wax soo saar tayo leh.
Tani waxay ku rakibtay musqusha gabadheyda oo si qurux badan ayey u shaqeysay. Si fudud loo rakibo, muuqaal ahaan iyo shaqeyn weyn. Durba waxay leeyihiin qorshooyin aad ku iibsato waxbadan kuna bedesho qasabadaha kale ee musqulaha isla mid.
Tan waxaa loogu iibsaday dib u habeynta musqusha. Tuunbo aad iyo aad u wanaagsan oo qiimaha waa qumman yahay. Ma ahan taageere ka soo baxa qashin-baxa laakiin wuxuu u qalmaa tayada qiimahaan.
Ka dib markii uu wax ka iibsaday dukaamada tafaariiqda hagaajinta guriga, ninkayga wuxuu ka helay waxyaabahan WOWOW waxayna ahaayeen qiyaastii kala bar qiimaha kuwa dukaamada ku jira. Ahaanshaha cheapskate-ka aan ahay, waan ku faraxsanahay inaan lacag keydiyo, gaar ahaan marka dib u eegista ay fiicnaayeen. Jadwalkaan ayaa tusaale kuu ah inaad heshay wax ka badan intii aad bixisay. Naqshadayntu way fiican tahay baakaduna way fiicnayd - waxay ahayd mid ilaalinaysa dusha sare sida waalidku ugu ilaaliyo dhallinta. Waxa kaliya ee diidmada ahi waa in mid ka mid ah maareynta dhammaato ay dusha sare dusha ka nabarro dusha ka saaran tahay. Marka la eego dhammaan baakadaha, waxay ahayd wax la yaab leh in la arko kuwan laakiin waxaa laga yaabaa in QC uu ku seexday orodkaas. Nasiib wanaag cilladaha ayaa ku jira dhinaca dambe ee qofna weligiis arki maayo marka laga reebo haddii aan qoorta u foorarsho xagal aan dabiici ahayn. Waqti uma aannu helin inaan dib u dhigno dib u dhigista. Tuubada waa mid aad u dheer marka la barbar dhigo inta badan qasabadaha musqusha taas oo ku wanaagsan buuxinta dhalooyinka dhaadheer. Waxaan runtii kula talin lahayn badeecadan asxaabta.
Waxaan tan ugu soo iibsaday musqusha aan dib u habeyn doonno mustaqbalka, sidaa darteed ma aanan dooneyn inaan lacag badan ku bixiyo, marka halkii aan ka iibsan lahaa Moen ama qasabadda Delta sida aan ugu haysto musqusha kale, waxaan iibsaday tan mid. Wax yar ma ogeyn inaan helayo qasabad tayo sare leh oo qiimaha badhkeed ah! Dhammaan isku xirayaasha (marka laga reebo xirmooyinka isku xirnaanta degdegga ah) waa bir. Ma aha biraha dhinta ama caag midab leh oo chrome ah - waa qasabad bir ah oo leh qalab bir ah iyo isku xirayaal. Tani maahan kiiska qasabadaha nooca ugu sarreeya laba jeer qiimaha. Tayada waa mid aad u fiican, naqshadeynta waa mid weyn oo sahlan in la rakibo, dhammaadkeeduna waa mid waara oo wasakh u leh. Waxay noqotay qasabadda musqusha ee aan ugu jecel nahay guriga. Waa la duubay oo la ilaaliyay si habboon oo aan nadiif ahayn markii ay timid. Waxa kaliya ee diidmada ah ee aan dhihi karo ayaa ah tilmaamaha rakibidda ayaa ka sii caddayn lahaa oo aan lahayn sharraxaad. Taas ka sokow, kani waa runtii iibsi aad u weyn- markii la gaadho wakhtigii aan beddeli lahaa qasabadaha kale waxaan raadin doonaa kuwan halkii aan ka bixin lahaa magaca magaca weyn. Aad loogu taliyay.
Wanaagsan! Waligey sidan kuma rakibin wax sidan oo kale ah, waana hubaa inay igu qaadatay wakhti yar maxaa yeelay waxay ahayd markii iigu horreysay ee aan sameeyo- laakiin runti ma ahayn wax aad u adag inaan kaligay sameeyo! Qaybta ugu adkayd waxay ahayd qaadista qasabaddii hore. Aad baan ugu faraxsanahay qasabadani baahsan.
Wanaagsan! Waligey sidan kuma rakibin wax sidan oo kale ah, waana hubaa inay igu qaadatay wakhti yar maxaa yeelay waxay ahayd markii iigu horreysay ee aan sameeyo- laakiin runti ma ahayn wax aad u adag inaan kaligay sameeyo! Qaybta ugu adkayd waxay ahayd qaadista qasabaddii hore. Runtii wI farxad leh ayaan ku beddelay 3 qasabadaha musqusha kuwan. Super fudud rakib haddii godkaagu uu yahay cabbirka saxda ah, taydu ma ahayn. Kaliya waxaan u qaatay inay dhammaantood isku mid yihiin. Markii aan qoday godadkaygii oo ka weynaa wax dhibaato ah ma aanan qabin. Waxay fadhiyaan dusha sare ee saxanka taas oo siinaysa muuqaalka saxan weyn. Iyagu iskama sii dheereeyaan wixii aan haystay.
Waxaan soo iibsanay wax aan jirin oo cusub oo la yimid qasabad "bilaash ah", waxay ahayd mid raqiis ah sidaa darteed waxaan go'aansanay inaan wax iibsanno taa bedelkeeda. Waxaan tagnay sanduuqa weyn ee dukaamada lagu hagaajiyo guriga wax walbana waxay ahaayeen kuwo casri ah oo raadinaya dhadhankeyga iyo ilaa $ 150. Waxaan go'aansanay inaan iska hubino khadka tooska ah waxaanna ka helnay midkaan si fudud nus ka mid ah wixii aan bixin lahayn. Waxay umuuqataa mid aad uqurux badan leh santuuqa sintiga waxayna dareemeysaa mid aad u adag.
Ma ahan in la takooro jinsikeyga, gabi ahaanba, laakiin waxaan ahay haweeney dooneysa inay bedesho saxanka musqusha iyo qasabada, kaligey. Waxaan soo iibsaday qasabadani, waanan furay 45 daqiiqo gudahood, waxaa lagu rakibay saxankeyga cusub. SAHLAN KU DHIS
Kuwani waa kuwa ugu fog qasabadaha ugu fiican ee aan keenay. Waxaan kaliya dib u qaabeynay, waxaanan iibsaday kuwa kale oo ahaa "magac magac" laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan helo kuwan oo dhan. Wax walba way ka fikireen! Shayga waa tayo sare leh. Soo iibso kuwan oo kama qoomameyn doontid.
Waxaan u soo iibsaday labo ka mid ah kuwan dayactirka sayidkeenna cusb. Waxaan ku lahaa arin yar mid ka mid ah qalabka laakiin shirkadda ayaa daryeeshay iyada dib u noqoshada iyada oo aan wax dhibaato ah. Aad ayaan ula dhacsanahay tayada iyo muuqaalka guridda ee yar yar ee noocyada ay si fiican ugu socdaan qurxintayada.
Tuubadaani waxay leedahay dhamaad aad u qurux badan oo muuqaal ah. Laabbada tubbada ayaa kor u kacda sidaa darteed waxaa jira meel badan oo aad ku dhaqi karto gacmahaaga. Qaybta bullaacadaha ee lagu daray, wey fiican tahay, sidoo kale.
Qasabad qasab ah oo runtii qurux badan. Waxay u egyihiin wax aan waxba tarayn. Mid ka mid ah bullaacadaha soo baxa ayaa la waayey, adeegga macaamiishana isla markaaba waxay ugu jawaabeen inay mid dirayaan.